“एमसीसी सम्झौता मैले गरेको हुँ”,, भन्दै गर्दा ,पुर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द् कार्कीलाई के भन्ने ( सहि वा गलत )?
काँग्रेस नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज क,र्पोरेशन (ए,मसीसी) देशको हितमा रहेको बताएका छन्। यो सम्झौता संस”दबाट पारित हुनुपर्ने जि,किर समेत गरे।प्रतिनिधि स’भामा बोल्दै कार्कीले यो सम्झौता आफू अर्थमन्त्री बन्दा गरेको बताउँदै धेरै व्यक्तिको
यसमा योगदान रहेको बताए। उनले भने-‘ए,मसीसी नेपालको लागी गे”म चेन्जर प्रोजेक्ट हो, यो परियोजना विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरुले सहभागिता जनाइसकेका छन्। त्यसैले यसको प्र’योग नेपा’लले पनि गर्नुपर्छ।‘एम,सीसीको वि’षयमा स’त्तारुढ दलकै नेताले भ्र,म फैलाएको उनले आ,रोप लगाए।
उनले भने-‘यो स”म्झौताबाट अमेरिकी सेना नेपालमा आउने कुरा निराधार हो। यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन।’कार्कीले आयो’जनाको ठे’क्का प्रक्रिया ग्लोबल टेन्डरबाट हुने बताउँदै ती आयोजनाबाट नेपाली समा’जको उ”न्नति हुने बताए। ब”हसमा उनले खुलेर नै MCC नेपालमा आवश्यकता
रहेको दा”बी गरेकोे छन् ! आज मात्र हैन कार्कीले स्वयम MCC सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।काँग्रेस नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज क,र्पोरेशन (ए,मसीसी) देशको हितमा रहेको बताएका छन्। यो सम्झौता संस”दबाट पारित हुनुपर्ने जिकिर समेत गरे।प्रतिनिधि स’भामा बोल्दै कार्कीले यो सम्झौता आफू अर्थमन्त्री बन्दा गरेको बताउँदै
धेरै व्यक्तिको यसमा योगदान रहेको बताए। उनले भने-‘ए,मसीसी नेपालको लागी गे”म चेन्जर प्रोजेक्ट हो, यो परियोजना विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरुले सहभागिता जनाइसकेका छन्। त्यसैले यसको प्र’योग नेपा’लले पनि
गर्नुपर्छ।‘ए,मसीसीको वि’षयमा स’त्तारुढ दलकै नेताले भ्र,म फैलाएको उनले आ,रोप लगाए। उनले भने-‘यो स”म्झौताबाट अमेरिकी सेना नेपालमा आउने कुरा निराधार हो। यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन।’कार्कीले आयो’जनाको
ठे’क्का प्रक्रिया ग्लोबल टेन्डरबाट हुने बताउँदै ती आयोजनाबाट नेपाली समा’जको उ”न्नति हुने बताए। ब”हसमा उनले खुलेर नै MCC नेपालमा आवश्यकता रहेको दा”बी गरेकोे छन् ! आज मात्र हैन कार्कीले स्वयम MCC सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
२०७८ श्रावण १४, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 697 Views